ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၃)ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ကစားသမားများ
28 Aug 2018 . 6:05 PM
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲစဉ်(၃)က ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်ပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ၊ အသင်းအတွက် လက်စွမ်းပြကာကွယ်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားတွေရှိသလို အနုတ်လက္ခဏာပြခဲ့တဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်(၃)မှာ ခြေစွမ်းအဆိုးရွားဆုံး ကစားသမားတွေကို Sportskeeda အားကစားဝက်ဘ်ဆိုက်က အခုလိုပဲ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် . . .
၅ – ကွန်ပနီ Kompany (၀ုလ်ဗ် – မန်စီးတီး)
၀ုလ်ဗ်နဲ့ တစ်ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ကွန်ပနီရဲ့ ကစားပုံက တစ်ခုခုကို ကြောက်ရွံ့နေသလိုပါပဲ။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ ဧရိယာအတွင်းမှာ ဘောလုံးအပျက်များခဲ့တာကလည်း ခဏခဏပါ။ သူ့ရဲ့နေရာယူပုံ အလွဲတွေကြောင့် တွဲဖက်ကစားသမား လာပေ့ါတ် Laporte ပါ အမှားမှား အယွင်းယွင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ လာမယ့်တစ်ပတ် ကစားမယ့်ပွဲကျရင်တော့ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola က ကွန်ပနီအစား ဂျွန်စတုန်းစ် John Stones ကို အသုံးပြုဖို့ များနေပါပြီ။
၄ – ၀ဲလ်ရှိုင်းယား Wilshere (အာဆင်နယ် – ၀က်စ်ဟမ်း)
အသင်းဟောင်း အာဆင်နယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ၀ဲလ်ရှိုင်းယားရဲ့ခြေစွမ်းက စိတ်ပျက်စရာပါ။ ကိုယ့်အသင်းဟောင်းဖြစ်လုိ့ လျှော့ကစားတာလားတော့ မသိပါဘူး။ သူ့ဆီကို ဘောလုံးရောက်တိုင်း ၀က်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ Tempo က ကျဆင်းသွားပြီး ဘောလုံးပေးတာမှာ တုံ့ဆိုင်းနေလို့ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေအတွက် ပြင်ဆင်ချိန် ရသွားခဲ့တယ်။ တိုက်စစ်မရလို့ ခံစစ်ကို ကူပေးတဲ့နေရမှာလည်း အားမကိုးရပါဘူး။ သူ့ကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်း ကွင်းလယ်မှာ Space တွေ အများကြီးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၃ – ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ် David Luiz (နယူးကာဆယ် – ချယ်လ်ဆီး)
နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ဂိုးရဖို့ တော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ တစ်သင်းလုံး ပိတ်ဆို့ ကစားနေတဲ့ နယူးကာဆယ်ကို ထိုးဖောက်ဖို့ ခက်နေချိန်မှာ ပယ်နယ်တီအခွင့်အရေးရခဲ့ပြီး ဟာဇက် Hazard က ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ်ရဲ့ တွေဝေနေမှုကြောင့် နယူးကာဆယ် ချေပဂိုးပြန်ရခဲ့ပါတယ်။ ဂျရူး Giroud ကို Foul လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ ဘောလုံးကို ယက်ဒ်လင် Yedlin ဂိုးရှေ့ ဖြတ်တင်ပေးချိန်မှာ ဒေးဗစ်လူးဝစ်ဇ် ခေါင်းတိုက်ရှင်းထုတ်ရမယ့်အစား ပြစ်ဒဏ်ဘော ပေးမလားဆိုပြီး တွေဝေနေတဲ့အတွက် ဟိုဆေးလူ Joselu က သူရှေ့ကနေ ခေါင်းတိုက် သွင်းယူသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
၂ – ရစ်ချာလီဆင် Richarlison (ဘုန်းမောက် – အဲဗာတန်)
ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲမှာ ရစ်ချာလီဆင်ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ ခြေစွမ်းက တကယ့်ကို အနုတ်လက္ခဏာပြခဲ့တယ်။ ပထမပိုင်းမပြီးခင် ပြိုင်ဘက်အသင်းနောက်ခံလူ စမစ် Smith ကို မလိုအပ်ဘဲ ခေါင်းနဲ့တိုက်ခဲ့တာကြောင့် တိုက်ရိုက်အနီကတ်နဲ့ အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်မှာလည်း ရစ်ချာလီဆင်ဟာ ဘယ်တောင်ပံနေရာမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့သလို ဘာဖန်တီးမှုမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
၁- လူကာကူ Lukaku (မန်ယူ – စပါး)
စပါးအသင်းကို (၃)ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ လူကာကူရဲ့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ဂိုးပေါက်လွဲချော်မှုက ပရိသတ်တွေအတွက် အဓိက လက်ညှိုးထိုးချင်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဂိုးသမား မရှိတော့တဲ့ ဂိုးပေါက်ကို လွဲအောင် ကန်ခဲ့တာက တော်ရုံ Skill တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကွင်းထဲမှာ လူကာကူပါရဲ့လားလို့ မေးရမယ့်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဘောလုံးထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းခဲ့သလို၊ ပြိုင်ဘက်နောက်ခံလူတွေနဲ့ Physical ခြင်း ယှဉ်ရင်လည်း အမြဲတမ်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။
ဒီကစားသမား(၅)ဦးက အခုတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၅)ရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ကစားသမားတွေပါပဲ။ Sportskeeda အားကစားဝက်ဘ်ဆိုက်က ဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက် ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လား . . .
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၃)ရဲ့ အဆိုးရှားဆုံး ကစားသမားမြား
၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ ပှဲစဉျ(၃)က ပွီးဆုံးသှားပါပွီ။ ဒီတဈပတျပှဲတှမှော ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှေ၊ အသငျးအတှကျ လကျစှမျးပွကာကှယျခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားတှရှေိသလို အနုတျလက်ခဏာပွခဲ့တဲ့ သူတှလေညျး အမြားကွီးပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတဈပတျပှဲစဉျ(၃)မှာ ခွစှေမျးအဆိုးရှားဆုံး ကစားသမားတှကေို Sportskeeda အားကစားဝကျဘျဆိုကျက အခုလိုပဲ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ . . .
၅ – ကှနျပနီ Kompany (ဝုလျဗျ – မနျစီးတီး)
ဝုလျဗျနဲ့ တဈဂိုးစီ သရကေခြဲ့တဲ့ပှဲမှာ ကှနျပနီရဲ့ ကစားပုံက တဈခုခုကို ကွောကျရှံ့နသေလိုပါပဲ။ အန်တရာယျရှိနိုငျတဲ့ ဧရိယာအတှငျးမှာ ဘောလုံးအပကျြမြားခဲ့တာကလညျး ခဏခဏပါ။ သူ့ရဲ့နရောယူပုံ အလှဲတှကွေောငျ့ တှဲဖကျကစားသမား လာပေ့ါတျ Laporte ပါ အမှားမှား အယှငျးယှငျးတှေ ဖွဈကုနျတယျ။ လာမယျ့တဈပတျ ကစားမယျ့ပှဲကရြငျတော့ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola က ကှနျပနီအစား ဂြှနျစတုနျးဈ John Stones ကို အသုံးပွုဖို့ မြားနပေါပွီ။
၄ – ဝဲလျရှိုငျးယား Wilshere (အာဆငျနယျ – ဝကျဈဟမျး)
အသငျးဟောငျး အာဆငျနယျနဲ့ရငျဆိုငျခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ဝဲလျရှိုငျးယားရဲ့ခွစှေမျးက စိတျပကျြစရာပါ။ ကိုယျ့အသငျးဟောငျးဖွဈလုိ့ လြှော့ကစားတာလားတော့ မသိပါဘူး။ သူ့ဆီကို ဘောလုံးရောကျတိုငျး ဝကျဈဟမျးအသငျးရဲ့ Tempo က ကဆြငျးသှားပွီး ဘောလုံးပေးတာမှာ တုံ့ဆိုငျးနလေို့ ပွိုငျဘကျကစားသမားတှအေတှကျ ပွငျဆငျခြိနျ ရသှားခဲ့တယျ။ တိုကျစဈမရလို့ ခံစဈကို ကူပေးတဲ့နရေမှာလညျး အားမကိုးရပါဘူး။ သူ့ကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျး ကှငျးလယျမှာ Space တှေ အမြားကွီးရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၃ – ဒေးဗဈလူးဝဈဇျ David Luiz (နယူးကာဆယျ – ခယျြလျဆီး)
နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ဂိုးရဖို့ တျောတျောလေးရုနျးကနျခဲ့ရတယျ။ တဈသငျးလုံး ပိတျဆို့ ကစားနတေဲ့ နယူးကာဆယျကို ထိုးဖောကျဖို့ ခကျနခြေိနျမှာ ပယျနယျတီအခှငျ့အရေးရခဲ့ပွီး ဟာဇကျ Hazard က ဂိုးအဖွဈ ပွောငျးလဲခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ မိနဈပိုငျးအကွာမှာပဲ ဒေးဗဈလူးဝဈဇျရဲ့ တှဝေနေမှေုကွောငျ့ နယူးကာဆယျ ခပြေဂိုးပွနျရခဲ့ပါတယျ။ ဂရြူး Giroud ကို Foul လုပျပွီး ရလာတဲ့ ဘောလုံးကို ယကျဒျလငျ Yedlin ဂိုးရှေ့ ဖွတျတငျပေးခြိနျမှာ ဒေးဗဈလူးဝဈဇျ ခေါငျးတိုကျရှငျးထုတျရမယျ့အစား ပွဈဒဏျဘော ပေးမလားဆိုပွီး တှဝေနေတေဲ့အတှကျ ဟိုဆေးလူ Joselu က သူရှကေ့နေ ခေါငျးတိုကျ သှငျးယူသှားခဲ့ပါတော့တယျ။
၂ – ရဈခြာလီဆငျ Richarlison (ဘုနျးမောကျ – အဲဗာတနျ)
ဘုနျးမောကျနဲ့ပှဲမှာ ရဈခြာလီဆငျရဲ့ အပွုအမူနဲ့ ခွစှေမျးက တကယျ့ကို အနုတျလက်ခဏာပွခဲ့တယျ။ ပထမပိုငျးမပွီးခငျ ပွိုငျဘကျအသငျးနောကျခံလူ စမဈ Smith ကို မလိုအပျဘဲ ခေါငျးနဲ့တိုကျခဲ့တာကွောငျ့ တိုကျရိုကျအနီကတျနဲ့ အထုတျခံခဲ့ရပါတယျ။ အဲဒီမတိုငျခငျမှာလညျး ရဈခြာလီဆငျဟာ ဘယျတောငျပံနရောမှာ ခွစှေမျးမပွနိုငျခဲ့သလို ဘာဖနျတီးမှုမှ မလုပျနိုငျခဲ့ဘူး။
၁- လူကာကူ Lukaku (မနျယူ – စပါး)
စပါးအသငျးကို (၃)ဂိုးပွတျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲမှာ လူကာကူရဲ့ မယုံနိုငျလောကျအောငျ ဂိုးပေါကျလှဲခြျောမှုက ပရိသတျတှအေတှကျ အဓိက လကျညှိုးထိုးခငျြစရာဖွဈခဲ့တယျ။ ဂိုးသမား မရှိတော့တဲ့ ဂိုးပေါကျကို လှဲအောငျ ကနျခဲ့တာက တျောရုံ Skill တော့ မဟုတျပါဘူး။ ကှငျးထဲမှာ လူကာကူပါရဲ့လားလို့ မေးရမယျ့အထိ ဖွဈခဲ့ရပွီး ဘောလုံးထိနျးသိမျးမှု အားနညျးခဲ့သလို၊ ပွိုငျဘကျနောကျခံလူတှနေဲ့ Physical ခွငျး ယှဉျရငျလညျး အမွဲတမျး ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။
ဒီကစားသမား(၅)ဦးက အခုတဈပတျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၅)ရဲ့ အဆိုးရှားဆုံး ကစားသမားတှပေါပဲ။ Sportskeeda အားကစားဝကျဘျဆိုကျက ဖျောပွခဲ့တာနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ သတျမှတျခကျြ ကိုကျညီမှုရှိရဲ့လား . . .